देउवाले ओलीलाई चूनौति दिँदै भनें:’महाकाली सन्धि त पारित गराएँ, यो संशोधन प्रस्ताव ? हेर्दै जानुहोला - USNEPALNEWS.COM
- यूस नेपाल न्युज प्रकाशित मिति: April 29, 2017
प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेस र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका शीर्ष नेताहरुवीच एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निवास बालकोटमा भेटवार्ता भएको छ ।
संविधान संशोधन र स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहमति जुटाउनको लागि एमालेलाई मनाउन काँग्रेस शीर्ष नेताहरु ओली निवास पुगेका हुन् । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र नेता कृष्ण प्रसाद सिटौला बालकोट पुगेका थिए ।
करिब एक घण्टा लामो चलेको छलफलमा एमाले अध्यक्ष ओलीले आफ्नो पूर्ववर्ती अडान कायमै रहेको प्रतिक्रिया दिएका थिए । तर काँग्रेस सभापति देउवाले संशोधन प्रस्ताव पारित गराएर मुलुकलाई निर्वाचनतर्फ जानुपर्ने भएकोले एमालेले सहयोग तथा समर्थन गर्नुपर्ने भनाई राखेका थिए । तर, अध्यक्ष ओलीले अहिलेको संशोधन प्रस्तावमा एमालेले कुनैपनि हालतमा सहयोग गर्न नसक्ने प्रतिक्रिया दिएका थिए ।
ओलीले आफ्नो अडान नछोडेपछि काँग्रेस सभापति देउवा पनि आक्रामक रुपमा प्रस्तुत भएका थिए । उनको भनाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो,’तपाईहरु यो गर्दा पनि मान्नुहुन्न, अनि त्यो गर्दापनि मान्नुहुन्न, के गर्न खोजेको हो ? एमालेले सहयोग नगरेपनि यो प्रस्ताव पारित हुन्छ ।’ देउवाले यसो भनिरहँदा ओलीले मुसुक्क हाँसेर पेचिलो जवाफ दिए,’एमाले बिना ? कसरी पास हुन्छ हामी पनि हेर्छौं ?’
त्यसपछि देउवाले ओलीलाई चूनौति दिँदै भनें,’महाकाली सन्धि त पारित गराएँ, यो संशोधन प्रस्ताव ? हेर्दै जानुहोला, हामी जसरी पनि यो प्रस्ताव भोलि नै पारित गराएर छाड्छौं ।’
छलफलमा एमालेका तर्फबाट भने पार्टी अध्यक्ष ओलीसँगै महासचिव ईश्वर पोखरेललगायत नेता सहभागी थिए ।